Home > Languages other than English > Somali
Wax ku saabsab Banyule
Imisa dad ayaa ku nool City of Banyule waana kuwee xaafadaha ay ka kooban tahay?
Golaha Degmada Banyule waxaa ku nool 125,000 dad ah oo ka soo kala jeeda 150 dal oo kala duwan.
Banyule waxay ku taal waqooyi-bari Melbourne waxayna ka kooban tahay xaafadaha soo socda:
Bellfield, Briar Hill, Bundoora, Eaglemont, Eltham North, Greensborough, Heidelberg, Heidelberg Heights, Heidelberg West, Ivanhoe, Ivanhoe East, Lower Plenty, Macleod, Montmorency, Rosanna, St Helena, Viewbank, Watsonia, Watsonia North iyo Yallambie.
Waa kuma Konsilarka woodhkayga sideese ula xiriiri karaa?
Banyule waxay u qaybsan tahay toddoba woodh. Woodkii kastaa waxaa ka wakiila qof loo yaqaan Konsilar, kaas oo ay soo doortaan dadka ku nool woodhkaas markay dhacaan doorashooyinka Konsilarka kuwaas oo la qabto afartii sano kasta. Si aad wax uga sii ogaato doorashooyinka konsilarka, iyo woodhka aad ku nooshahay iyo Konsilarka ku matala, ka eeg website-keena - www.banyule.vic.gov.au – ama la xiriir taleefanka9490 4222.
Waxaad kala xiriiri kartaa Konsilarkaaga wixii talooyin ah ama cabasho ah oo ku saabsan arimaha deegaankaaga. Faahfaahinta Konsilarkaaga waxay kaloo ku jiraan website-keena – www.banyule.vic.gov.au – am aka wac taleefanka 9490 4222.
Waa maxay adeegyada ay bixiso Degmada Banyule?
Golaha Degmada Banyule wuxuu siiyaa dhowr adeeg daganeyaasha, ay ka midka yihiin qaadida qashinka, tas-hiilaadka waqtiga firaaqada (sida barkadaha dabaasha, jiimamka, iyo goobaha cayaaraha) iyo adeegyada caawiya carruurta iyo qoysaska, dadka waayeelka ah iyo dadka qaba iinta.
Golahu wuxuu kaloo qabtaa xuska muwaadinimada saddexdii biloodba mar oo loo qabto daganeyaasha Banyule kuwaas oo noqonaya muwaadiniin Australia ah. Haddii aad doonayso inaad noqoto muwaadin Australia ah waxaad codsan kartaa adoo kala xiriiraya Wasaaradda Socdaalka iyo Ilaalinta Xuduudda (Department of Immigration and Border Protection) taleefan 131 880 ama ka eeg website-kooda - www.immi.gov.au
Nala soo xirriir
Saacadaha Xafiisku furan yahay:
Isniinta ilaa Jimcaha 8.30subaxnimo-5.00galabnimo
Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo aad u baahan tahay caawimaada turjubaan, fadlan la xirriir TIS National 131 450 weydiina inay kuu xirriiriyaan Golaha Banyule 9490 4222.
Goluhu wuxuu sidoo kale leeyahay lambar taleefan oo khaas ah (Teleefanka teebka ah – TTY) oo ay isticmaali karaan dadka aan hadli Karin ama si fiican wax u maqlin. Lambarku waa sidan 133 677.
Sidoo kale waxaad booqan kartaa Xarumaha Adeega Golaha.Kuwani waxay ku yaaliin:
Ivanhoe: 275 Upper Heidelberg Road
Sidee baan rabaayadeyda uga diiwaangeliyaa Degmada?
Haddii aad leedahay bisad ama eey, waa inaad ka diiwaangelisaa degmada. Waxaan ka qaadaynaa ujradda diiwaangelinta sannad kasta eygii ama bisaddii kasta oo aad leedahay. Ujraddaas waa in lagu bixiyaa Degmada 10ka Abriil sannad kasta.
Si aad u diiwaangeliso xayawaanka rabaayadaada waxaa u baahan tahay inaad soo buuxiso foom oo aad noo soo celiso. Foomka waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah Xaruumaheena Adeegga, ama website-keena ama adigoo nasoo-waca. Isla markii eygaaga ama bisaddaada la diiwaangeliyo, waxay xiraynaysaa tag noo sheegaya in rabaayadda aad leedahay.
Dhammaan bisadaha iyo eeyada oo ka weyn saddex bilood waa in mikro-jiib lagu xiraa. Kaas oo camaliyad aan xanuun lahayn ah taas oo jiib yar la-dhexgeliyo luqunta xayawaanka. Jiibkaas waxaa ku jira macluumad la xiriirinaya rabaayadda adiga, oo milkiilaha ah. Degmadu waxay ku talinaysaa in jiib lagu xiro xayawaanka rabaayadaha ah oo dhan. Waxaan ku qabanaa maalmaha jiibka oo joogto ah Axadda labaad ee bil kasta 10am ee Ivanhoe Service Centre, 275 Heidelberg Road Ivanhoe. Jiib-ku-xiridda waxaa la sameeyaa maalmahaas ayadoo ah qarash la yareeyey oo ah $20.00. Ballan ama buukin in la samaysto waa lagama maarmaan.
Maxaan samayn karaa haddii ay xayawaanka rabaayadaydii lunto?
Haddii ay kaa lumaan bisadda ama eeyga, nala soo-xiriir. Rabaayaddaada waxay haysataa fursad fiican in lagu soo-celiyo haddii mikro-jiibku ku xiran yahay, ay diiwaangashan tahay ama tag u xiran yahay.
Haddii aad hesho rabaayad luntay, fadlan la soo xiriir Degmada.
Immisa rabaayadood ayaan ku haysan karaa gurigayga?
Haddii aad doonayso inaad haysato wax ka badan laba eey ama laba bisadood waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto Degmada si aad u hesho ruqsad. Waxaa kaloo jira xeerar kale oo ku saabsan nooca iyo tirada xayawaanka iyo shimbiraha aad ku haysan karto gurigaaga. Fadlan nagala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Eeygaygu mar kasta ma u baahan yahay in qoolka lagu hayo?
Haddii aad kula soconayso eeygaaga waddada ama marshibiyeedka, waa inuu ku xiran yahay qool aad koontaroolayso. Waxaa laguu ogol yahay inaad eeygaaga ku sii dayso baarkiyada qaarkood, hase ahaatee aan u dhaweyn meelaha carruurtu ku cayaarayso ama meelaha la marayo. Waa lagu ganaaxi karaa haddii aadan kontaroolin eeygaaga uuna dhaawaco cid kale.
Waa inaad mar kasta aad sidataa baag balaastiigga ah si aad uga nadiifiso xaarka eeygaaga meelaha dadweynaha. Haddii aadan sidaas samayn waxaad helaysaa $200 ganaax ah.
Maxaan sameeyaa haddii eeygaygu ama eeyga deriskaygu uu si aad ah u ciyayo?
Waxaa jira sababo badan oo ay eeyadu u ciyaan, sida kelinimada, xiiso-la’aan ama haddii aysan helin jimicsi ku filan.
Haddii derisyadaadu kuu sheegaan in eeygaagu ciyayo mar kasta, waxaad u baahan tahay inaad ku xareyso guriga markii aadan joogin guriga. Haddii eeyga deriskaagu uu ku dhibayo cigeedu waxaa wanaagsan inaad dareenkaaga kala hadasho ayaga.
Bisadayda habeenkii dibadda ma u sii-dayn karaa?
Waxaa fiican inaad bisaddaada ku hayso guriga gudahiisa markii aad hurudo. Haddii aad dibadda u sii dayso bisaddaada habeenkii waxaa lagu dili karaa waddada, ama waxay aadi kartaa ugaarsi waxayna dili kartaa shimbiraha ahliga ah ama duurjoogta.
Ma ku haysan karaa shimbir backyard-kayga?
Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin inay digaag ku haystaan back-yardhkooda si ay uga helaan ukumo fareesh ah ayna ka caawiso laynta cayayaanka jardiinka. Ka hor intaadan sidaas samayn waa inaad la hadashaa Degmada maaddaama ay jiraan xanibaadyo ka jira tirada digaagga iyo nooca guriga aad u samaynayso. Ruustarada lama ogola waxaana kaa qaadi doonaa Degmada haddii laga helo guriga xaafad kasta.
Adeegyada carruurta, dadka dhalin-yarada ah iyo qoysaskooda
Waa maxay adeegyada Caafimaadka Hooyada iyo Ilmaha oo laga heli karo Banyule?
Banyule waxay siisaa adeegyada Caafimaadka Hooyada iyo Ilmaha ee qoysaska haysta cunugyada iyo carruurta laga bilaabo dhalashada iyo da’da dugsiga. Waxay siiyaan la-talinta 10ka Da’da Asaasiga iyo Marxaladaha (KAS) oo ay ku jiraan booqashada guriga ee bilowga ah, ka dibna 2, 4 iyo 8 asbuuc, iyo 4, 8, 12, 18 bilood, iyo da’da 2 iyo 3 ½ sano ah. Mid kasta oo la-talintaas ah waxaa lagu siinayaa fursadda inaad ka hadasho dareenadaada aad ka hadasho waayo-aragnimadaada waalidnimo iyo siyaabaha loo hagaajin karo caafimaadka, koritaanka iyo horumarka ilmahaaga.
Adeegyadaasi waxay kaloo siiyaan taageero dheeraad ah, caawimaad iyo meel-u-dirid dadka u baahan.
Adeegyada Caafimaadka Hooyada iyo Ilmaha waxay ka taageertaa qoysaska iyo carruurta qaybahan soo-socda:
Horumarka & Qiimaynta
Ladnaanta & Ammaanka
Taageerada bulshadeed iyo isku-xirnaanta bulshadeed
Buufiska Ka-dambeeya Dhalmada
Si ballan loo sameeyo, fadlan wac 9457 9990 Isniinta ilaa Jumcha 9am ilaa 1pm.
Sidaas baddalkeeda waxaad ballan ka samaysan kartaa onlineka ah www.banyule.vic.gov.au/mch
Taageero 24 saac ah ayaa lagu helaa Khadka Caafimaadka Hooyada iyo Ilmaha oo ah 13 22 29.
Waa maxay tallaalka uu cunugaygu/ilmahaygu u baahan yahay inuu helo?
Waxaa jira cuduro daran oo badan oo looga hortagi karo tallaalka. Carruurta waxaa si joogto ah loo tallaalaa dhalashada, lix asbuuc, afar bilood, lix bilood, 18 bilood iyo da’da afar sano ah. Tallaal dheeraad ah waxaa hela carruurta ku jirta dugsiga sare.
Waqtiyada iyo goobaha kulanka tallaalka ka eeg website-ka Golaha Degmada ama la xiriir Adeegga Macaamiisha oo ah taleefanka 9490 4222.
Maxaa Kooxaah-cayaaraha (playgroups) ah oo laga helaa Banyule?
Kooxaha cayaaraha (Playgroups) waxay siisaa carruurta iyo waalidiinta fursadda inay cayaaraan, wax bartaan ay bulshoobaan ayadoo ku kacayso qarash yar. Kooxaha cayaaraha ee Banyule waxaa guud ahaan wada waalidiinta iyo ururada waalidiinta. La xiriir Playgroups Victoria taleefanka ah 9388 1599 ama keeg http://www.playgroup.org.au/FindaPlaygroup.aspx si looga raadiyo Kooxaha cayaaraha ee Banyule.
Maxaa adeegyo Child-Care ah ayaa laga heli karaa Banyule?
Golaha Degmada Banyule City waxay leedahay oo maaraysaa xaruumaha Daryeelka Maalmeed ee Dheer taas oo ku taal Greensborough, Heidelberg West iyo Heidelberg Heights. Xaruun kasta waxay bixisaa barnaamijyada waxbarashada iyo daryeelka ee carruurta laga bilaabo dhalashada ilaa lix sano.
Khayaarada child-careka waxaa laga helaa ayadoo la marayo adeegyada la-maareeyey ee kuwa gaar ahaaneed iyo kuwa bulshada. Khayaarada waxaa ka mid ah Daryeelka marlaha ah kaas oo bixiya child-care muddo gaaban ah tus. laga bilaabo 9am-12pm iyo Family Day Care kaas oo ku bixiya guryo gaar ah. ka eeg http://www.banyule.vic.gov.au/Services/Community-Services/Children/Child-Care wixii macluumaad dheeraad ah.
Maxaa malcamado ah ayaa laga helaa Banyule?
Malcamadaha, waxaa kaloo loo yaqaan kindhaha, waxay siiyaan barnaamijyo waxbarasho carruurta kuwaas oo da’doodu u dhaxayso saddex iyo shan sano jiro. Waxaa la filayaa in carruurta oo dhan dhigtaan barnaamijka malcamada sanadka ka horreeya oo ay dugsiga bilaabaan.
Waxaa jira laba khayaar ee dhigashada barnaamijka malcamada. Carruurtu waxay dhigan karaan malcamadda bulshada, kuwaas oo ku yaal xaafadaha Banyule. Golaha Degmada Banyule City wuxuu wadaa laba malcamadood bulsho oo ku yaal Heidelberg West; Malcamada Olympic Village iyo Malcamada Audrey Brooks. Khayaarka labaad waa in la dhigto barnaamijka malcamada oo ka dhaca Long Day Care. Golaha Degmada Banyule City wuxuu ku bixiyaa barnaamijyada malcamadda oo midaysan xaruumahooda Long Day Care ah oo ka jira Greensborough, Heidelberg West iyo Heidelberg Heights.
Golaha Degmada Banyule City wuxuu maareeyaa ku-qoridda malcamadaha bulshada, wuxuuna ku casuumaa qoysaska inay ku qoraan laba sano ka hor bilaabidda ilmahaaga malcamadda. Ku-qoridd haysteyaasha Kaarka Daryeelka waxay furantaa Isniinta ugu horreysa bisha Maariso. Waxaa jira ujrad yar si loo qoro ilmahaaga hase ahaatee waa u lacag la’aan haysteyaasha Kaarka Daryeelka Caafimaadka. Wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir Golaha Degmada Banyule City taleefanka 9490 4222.
Maxaa barnaamijyo Dhalinyarada ah ayaa laga helaa Banyule?
Adeegga Dhalinyarada ee Banyule waay qadarisaa, howlgelisaa oo xoojisaa dadka dhallinyarada ah oo da’doodu tahay 10-25 sano kuwaas oo ku nool, dugsiga aadaya, ka shaqaynaya ama la bulshoobaya bulshada Banyule. Adeegga Dhalinyarada ee Banyule wuxuu ku caawin karaa macluumaad, nashaadyo, khayraad iyo taageero dadka dhalinyarada ah iyo qoysaskooda.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tas-hiilaadka farshaxanka hal-abuurka ee dhalinyaradeena, barnaamijyada dhalinyarada, ama khayaarada tageerada iyo meel-u-diridda fadlan ka eeg www.bayuleyouth.com ama ka wac 9457 9855 wixii caawimaad dheeraad ah.
Maxaa tas-hiilaadka watiga firaaqada ah ayaa ka jira Golaha Degmada Banyule uu bixiyaa?
Golaha Degmadu wuxuu ku bixiyaa tas-hiilaadka waqtiga firaaqada oo ay ka mid yihiin maktabadaha, barkadaha dabaasha iyo naadiyada caafimaadka iyo goobaha golafka.
Maxaa maktabado ayaa ka jira Banyule?
Waxaa jira saddex maktabadood ee Banyule oo ku yaal Rosanna, Ivanhoe iyo Watsonia oo lagu daray adeegga maktabadda oo wareega. Waa lacag la’aan in laga mid noqdo waxaadna amaahan kartaa buugagta, DVD-yo, fiidiyowyo iyo wargeysyo Ingiriisi iyo luqado kale ku qoran. Waxaa kaloo jira kombiyuutaro leh intarneed lacag la’aan ah oo la heli karo.
Maktabaduhu waxay qabtaan sheeko xariirka cunugyada iyo kuwa malcamadaha, munaasabado fasax-weynaha dugsiyada iyo nashaadyo kale oo badan. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan maktabadaha Banyule ka wac Yarra Plenty Regional Library taleefanka 9408 7888 ama ka eeg www.yprl.vic.gov.au
Maxaa xaruumaha watiga firaaqada ah ayaa ka jira Banyule?
Waxaa jira xaruumaha waqtiga firaaqada oo ay wadaan Golaha Degmada ee Banyule City. Xarunta Ivanhoe Aquatic Centre oo ku taal Ivanhoe iyo Olympic Leisure Centre ee Heidelberg West labaduba waxay leeyihiin jiim, barkadaha dabaasha, spa, sauna iyo crèche iyo weliba kala doorashada barnaamijyada fayo-dhowrka. Waxaa kaloo ku yaal Banyule Macleod YMCA, xarunta madadaalada iyo fayo-dhowrka.
Tababarka netball-ka iyo salladda iyo tartamada waxaa loo qabtaa dhammaan da’ha iyo gareedyada ku yaal Banyule Netball Stadium, Olympic Leisure Centre iyo Banksia Basketball Stadium.
Garoonka Ivanhoe Golf Course waxay bixisaa khibrad golofka oo tayada sare oo la siiyo cayaartoyda golofka oo heerarka oo dhan ah.
Maxaa Neighbourhood Houses ayaa ka jira Banyule?
Banyule waxay leedahay toddoba Neighbourhood Houses & Xaruumaha Waxbarashada oo ku yaal Bundoora, Greensborough, Ivanhoe, Rosanna, Watsonia iyo West Heidelberg.
Goobaha Neighbourhood Houses waxay bixiyaan koorsooyin ballaaran oo ka mid yihiin waxbarashada, waqti-firaaqada, madadaalashada, barnaamijyada hal-abuurka iyo horumarinta shaqsiyadeed. Qaar ka mid ah Neighbourhood Houses waxay kaloo bixiyaan koorsooyinka Ingiriisiga oo Luqad Labaad ah. wixii macluumaad dheeraad ah nala soo xiriir.
Maxaa kooxo nashaadeed ka jira Banyule oo aan ka mid noqon karaa?
Dadka waayeelka ah waxay ka mid noqon karaan kooxaha bulshadeed waxayna ku raaxaysan karaan nashaadyada qorshaysan ee beya’dda la-taageero. Gaadiid loogu talagalay kooxahan ayaa la helaa waxaana la bixiyaa qado.
Maxaa koox-socod ah iyo wadiiqooyinka baaskiilka maro ayaa ka jira Banyule?
Waxaa jira dhowr koox-socod ah iyo wadiiqooyinka baaskiilka ee Banyule oo loo sameeyey daganeyaasha si ay ugu raaxaystaan. Fadlan nagala soo xiriir wixii faahfaahin ah ee wadiiqada kuu dhow.
Maxaa baarkino iyo jardiinooyin ayaa laga helaa Banyule?
Waxaa jira baarkino, jardiinooyin iyo garoonada cayaaraha ee Banyule. Kuwa badan waxay leeyihiin kooxo-cayaareed loo sameeyey carruurta, barbaqiyuuga iyo tas-hiilaadka cayaarta. Wixii macluumaad dheeraad ah nala soo xiriirii.
Caawimaadda la siiyo dadka waayeelka ah iyo dadka iinta leh
Waa maxay adeegyada daryeelka guriga iyo bulshada oo Golaha Degmadu bixiyo?
Adeegyada Daryeelka Guriga iyo bulshada ee Golaha Degmada wuxuu taageeraa oo uu caawiyaa dadka daciifka waayeelka ah, dadka ay hayso iimaha dhexe iyo kuwa daran, iyo daryeelayaashooda.
Adeegyadaas waxay ujeedaan inay kor-u-qaadaan tayada nolosha ayagoo ku cawinaya dadku inay dhowraan ammaankooda iyo madax-bannaanidooda guriga iyo bulshada dhexdeeda.
Adeegyada la bixiyo waxaa ka mid ah:
Taageerada guriga – ku caawinta howlaha sida huufarka, nadiifinta, dukaamaysiga iyo baarkinka.
Taageerada shaqsiyadeed – caawimaad laga siiyo qubayska, labiska iyo daryeelka kalee shaqsiyeed.
Taageerada nasinta – siinta daryeeleyaasha nasiino ayadoo loo daryeelo qofka ku jira daryeelkooda dhowr saacadood.
Dayactirka guriga – caawimaad laga siiyo xagga jardiinka ama dayactirada yaryar ee gurigaaga.
Ma jiraan wax adeegyo cunto ah oo ka jira Banyule?
Waxaan bixinaa adeegga cuntada la-geeyo kaas oo geynaya cuntooyin caafimaad leh oo macaan gurigaaga.
Ma jiraan kooxaha nashaadyada oo ay ka heli karaan dadka waayeelka ah Banyule?
Dadka waayeelka oo daciifka ah waxay ka mid noqon karaan kooxaha bulshada waxayna ku raaxaysan karaan nashaadyada qorshaysan oo ka dhaca beya’dda la-taageero. Gaadiid loogu talagalay kooxahan ayaa la heli karaa ayadoo qadona la siiyo.
Sidee baan ku heli karaa adeegyada uu bixiyo Golaha Degamadu?
Si loo helo adeegyada Golaha dhammaan macaamiisha jira waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan My Aged Care si ay isugu diiwaangeliyaan caawimaadda. Wixii Cuntooyinka la-geeyo iyo taageerada Shaqsiyeed My Aged Care waxay si toos ah ugu dirtaa macaamiisha adeegga Golaha. Wixii codsiyada dhammaan adeegyada kale ah Macaamiisha waxaa loo diri doonaa Adeegga Qiimaynta gobolka si ay u maraan qiimayn buuxda.
Waa maxay tallaalada aan u baahanahay inaan qaato ka waayeel ahaan?
Waxaa jira cuduro daran oo badan kuwaas oo looga hortagi karo tallaal. Golahu wuxuu siiyaa tallaalo dadka waayeelka ah oo ku jiraan tallaalka dureyga (flu).
Ma jiraan Kooxaha Muwaadiniinta Seniyarka ee ka jira Banyule?
Waxaa jira Kooxaha Muwaadiniinta Seniyarka ee ka jira Banyule. Qaar ka mid ah kooxahan waxay ka tirsan yihiin asalo dhaqaneed gaar ah. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kooxahan gaarka ah nala soo xiriir.
Maxaa adeegyada taageerada ah ay heli karaan dadka iinta leh?
Dowladda Australia waxay shaacisay Mashruuca National Disability Insurance Scheme (NDIS), kaas oo ka howl-galay Banyule Luuliyo 2016. Barnaamijkan cusub wuxuu si weyn u kordhin doonaa helitaanka adeegyada wuxuuna kor-u-qaadi doonaa khayaarada la siiyo daganeyaasha qaba iinta joogtada ah kuwaas oo ka yar da’da 65 sano.
Waxaa jira dhowr haya’dood oo bixiya adeegyada taageerada la siiyo carruurta iyo waayeelka qaba iinta oo degan Banyule oo hoos yimaada NDIS. Kuwaasna waxaa ku jira tababarka, u-qareenida, adeegyada soo-dhexgalka hore, child-care-ka, adeegyada shaqo-helidda iyo adeegyada nasinta. Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan nala soo xiriir.
Maxay yihiin nashaadyada madadaalada oo ay heli karaan dadka iinta leh?
Waxaa jira dhowr barnaamijyada cayaaraha iyo madadaalada oo loogu talagalay dadka leh iinta ee Banyule. Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan nala soo xiriir.
Sidee baan ku heli karaa ruqsadda baarkinka haddii aan qabo iinta?
Ruqsadda baarkinka oo la siiyo dadka qaba iinta waxaa laga helaa Golaha Degmada. Fadlan ogsoonow ruqsadahan waxay ku xiran yihiin shuruudo adag. Ruqsadaha baarkinka waa lacag la’aan si kastaba ha ahaatee ruqsadaha baddelidda waxaa laga qaadaa ujrad. Haddii aad qabto iin aad jeceshahay inaad codsato ruqsadda baarkinka fadlan nala soo xiriir.
Halkee baa lay-ogol yahay inaan dhigto baabuurkayga?
Calaamadaha baarkinka waxay kuu sheegayaan halka laguu ogol yahay iyo intay la e’g-tahay inaad dhigato baabuurkaaga ee meelaha qaarkood. Waa inaadan dhigan baabuurkaaga wax ka badan waqtiga ku qoran calaamadda. Waxaa jira Banyule xeerar ku saabsan halkaad joogsan karto ama dhigan karto baabuurkaaga kuwaas oo ay tahay inaad raacdo. Haddii aadan raacin xeerarkaas waa lagu ganaaxayaa.
Halkee baan lay ogalayn inaan dhigto baabuurkayga?
Waa inaadan dhigan baabuurkaaga dariiqa yarkaa, kaas oo ah meesha cawska leh ee dhinaca waddada. Si kastaba ha ahaatee, waxaad dhigan kartaa meesha dhinaceeda maaddaama aad haysato 3 mitir oo u dhaxaysa dhinaca baabuurkaaga iyo xariiqda cad oo is-haysata. Xariiqda cad oo is-haysata waxay ku calaamadaysan yihiin bartamaha waddada. Waa inaad u jirsataa 3 mitir oo bannaan xariiqda cad oo is-haysata (laga soo bilaabo dhinaca baabuurkaaga ilaa dhinaca baabuurkaaga). Haddii aysan jirin 3 mitir oo bannaan halkaas ma dhigan kartid. Xariiqaha dhinaca jaallaha ah waxay ku calaamadaysan yihiin waddada dusheeda, oo saaran dhinaca xakabadda waddada. Baabuurta waa inaan la dhigin meesha ku xigta Xariiqaha dhinaca jaallaha ah.
Waa inaadan dhigan meel u jirta hal mitir dab-demiyaha (fire hydrant). Dab-demiyeyaashu waxay ku yaalaan meelo Banyule ah si dhaqso loogu helo biyaha si dababka loogu demiyo. Dab-demiyeyaashu waxay badanaa ku yaallaan dariiqa yar waxaana ka muuqda midabka fidada oo dusha casaan ka ah ama daboolka balaastiigga madow balaaran oo dhulka ku yaal.
Waa inaadan dhigan baabuurkaaga meelaha looga gudbo oo laga soo-galo drivewayga ama meelaha rakaabku maro. Waxaa kaloo dambi ah in baabuur la dhigto meel ka mid ah marshabiyeedka.
Ma istaagi karaa soonaha aan-la-istaagi karin ama soonaha wax-laga-raro/dejiyo?
Halkii ay ka jirto calaamadda ‘No Stopping’, waa inaadan joojin baabuurkaaga sabab kasta, xataa haddii aad ku jirto baabuurkaaga ama aad ka tagto baabuurkaaga oo daran.
Soonayaasha wax laga raro/dejiyo waxaa adeegsada baabuurta ganacsiga si u dejiyaan ama u-raraan walxaha oo qayb ka ah shaqadooda. Waa inaadan dhigan baabuurkaaga meesha ‘Loading Zone’ inay ruqsad kuu siisay VicRoads maahee.
Sidee baan ku garan karaa meesha baarkinka ee dadka iinta leh?
Meelaha baarkinka oo loogu talagalay dadka iinta leh waxaa lagu muujiyey calaamad leh wheelchair. Meelahaas baarkinada ah waxaa keliya oo adeegsan karaa dadka qaba iinta kuwaas oo haysta ruqsad loo yaqaan Ruqsadda Qaybta 1. Ruqsadaha baarkinka iinta waa lacag la’aan. Haddii aad iin leedahay aadna u baahan tahay ruqsad, wac Golaha Degmada.
Ma dhigan karaa baaburkayga meel dadweyne si aan ugu xayeesiiyo iib?
Waa inaadan dhigan baabuurkaaga waddada, meelaha cawska leh ee waddada dhinaceeda ama meel dadweyne oo kasta si aad ugu xayeesiiso iib. Haddii aad sidaas samayso waa lagu ganaaxayaa.
Halkee baan dhigan karaa baabuurkayga hadduu jabo ama uusan diiwaangashanayn?
Baabuurta kuwaas oo jaba ama aan ka-diiwaangashanayn VicRoads waa inaan looga tegin ayaga oo yaala waddada ama meelaha dadweynaha. Golaha Degmadu way ka qaadayaan baabuurkaaga meeshaas waxaadna bixin doontaa lacag si aad dib ugu hesho waana lagu ganaaxayaa. Waa inaadan ku dayactirin baabuurkaaga waddada, dariiqa yar ee waddada dhinaceeda ah ama meelaha dadweynaha ee kale ama waa lagu ganaaxi karaa.
Waa maxay qiyaasaha Golaha Degmada markeese la bixiyaa?
Markii aad leedahay guri waa inaad lacag siisaa Golaha Degmada sannad kasta taas oo loo yaqaan reytyada (qiyaasaha). Reytyada waxaa loo isticmaalaa in lagu qabto adeegyo bulshada oo ay ka mid yihiin qaadista qashinka, waddooyinka iyo wadiiqooyinka la maro, nalaynta baarkinyada, baarkinada iyo jardiinooyinka iyo tas-hiilaadka madadaalada. Ogeysiinta reytkaaga waxaa ku jira sannad kasta waa Dulsaarka Guriga ee Adeegga Dab-demiska, kaas oo Golaha Degmadu biil ka sameeyo oo ururiyona asagoo ka masuula Xafiiska Dakhliga Dowlad-goboleedka.
Golaha Degmada wuxuu adeegsadaa qiimaha guriga oo sal u ah xisaabinta intaad bixinayso reyt ahaan. Waxaa kaloo jira dulsaarka qashinka oo gaar ah oo lagu guro biinanka qashinka oo 120 ah iyo biinanka qashinka cagaaran oo 240 litre ah.
Reytyada iyo dulsaaradu waxaa lagu bixiyaa afar hafto. Lacag-bixinta waxay taagan tahay in la bixiyo:
Haftada 1aad – 30 Sabteembar
Haftada 2aad – 30 Nofeembar
Haftada 3aad – 28 Febaraayo
Haftada 4aad – 31 Maajo
Golaha Degmadu wuxuu haystaa khayaaro badan oo lagu bixiyo reytyadaada; fadlan nasoo wac si aad wax badan u-ogaato. Haddii ay ku hayaan dhibaatooyin dhaqaale aadna u baahan tahay caawimaad xagga qorshaha lacag-bixinta fadlan la xiriir Golaha Degmada si aad ugala hadasho xaaladdaada.
Ma u baahanahay ruqsad si aan u ballaariyo ama u-cusboonaysiiyo gurigayga?
Haddii aad dhisayso guri cusub ama aad qorshaynayso inaad ballaariso gurigaaga, waxaad ubaahan doontaa inaad codsato ruqsadda qorshaynta iyo ruqsadda dhismaha
Shaqaalaha Golaha Degmada ee Banyule waxay ku farxi doonaan inay bixiyaan macluumaadka iyo talooyinka si ay kaaga caawiyaan mashruucaaga dhismaha. Waxaan kaloo kugu caawin karnaa mashruuca dhismaha oo soconaya.
Ruqsadda qorshaynta waxaa kaloo loo baahan doonaa xagga jaridda geedaha.
Waa maxay halisyada dabku?
Si loo ilaaliyo ammaanka cid walba waa inaad ka ilaalisaa gurigaaga inuu ka madax-bannaan yahay halisyada dabka sida cawska dhaadheer ama burburka. Golaha Degmada waxay bannayn karaan halisyada dabka adiga oo qarashka bixinaya.
Mala ii-ogol yahay inaan adeegsado gubaha ama aan gubo waxyaalaha qashinka ah?
Si loo yareeyo wasaqowga hawada, laguuma ogola inaad adeegsato gubaha ama aad wax ku gubto hawada furan. Waxyaalaha qashinka ah waa in la burburiyaa, la ridqaa, dib loo-farsameeyaa ama lagu ridaa biinanka qashinka.
Ma u baahnahay alaamka dabka ee guriga gudihiisa?
Waa inaad hubisaa inaad haysato sheegayaasha dabka oo shaqaynaya oo ku rakiban gurigaaga gudihiisa sidaas darteed haddii uu jiro dab daganeyaashu waxaa looga digi doona alaamka oo baqtiya. Waxaa fiican in la baddalo batariyada 6dii biloodba mar, haddii aad sidaas samayso waqtiga bilowga iyo dhammaadka kaydinta ilayska-maalinta waxaa fudud in la xusuusto.
Goormaa la ii-ogolyahay inaan jaro cawskayga?
Waxa keliya oo aad adeegsan kartaa caws jaraha laga bilaabo 7am-8pm Isniinta ilaa Jumcaha maalmaha weekendiska iyo maalmaha fasax-weynaha dadweynaha.
Maxaan ku sameeyaa laamaha soo-lusha?
Geedaha soo-lusha ama geed-gaabka ah waxay noqon karaan halis. Fadlan jar oo ku sallax guriga iyo/ama kuwa aad uga sarreeya dhulka si loogu ogolaado dadka inay hoosta ka maraan.
Guri kastaa ma leeyahay lambar?
Golaha Degmadu guri kasta wuxuu siiyaa lambar. Haddii aad leedahay ama degan tahay guri, waa inaad hubisaa in lambarka si fudud loo arki karo. Taasi waa muhiim sidaas darteed haddii ay jirto wax degdeg ah, booliiska, ambalaaska ama adeegga dab-demiska ayaa si dhaqso ah kuu heli kara.
Sidee baan u kaydsan karaa tamarta gurigayga dhexdiisa?
Kaydinta tamarta waxay kuu dhaqaalaynaysaa lacagta waxaase ka sii muhiimsan, waxay yarayn doontaa gaasaska kuwaas oo waxyeelleeya hawadeena. Halkan waxaa ah qaar siyaabo fudud ah oo loo kaydsado tamarta:
Dami nalalka iyo qalabka korantada markaan loo baahnayn.
Adeegso guluubyada nalalka tamarta dhaqaaleeya
Dooro qalabka korantada oo leh Qiyaasida Tamarta wacan waxaadna hubisaa inay si fiican u rakiban yihiin.
Ku qallaji dharkaaga xariga dharka halkii aad adeegsan lahayd qalajiyaha dharka.
Adeegso dahaaridda; gufee tararka iyo godadka, albabadana xir.
Dami kulayliyaha ama qaboojiyaha markaad ka tegaysi?
Samayso xoogaa qubeys yar waxaadna adeegsataa madaxa shaawarka oo biyaha dhaqaaleey.a
Ku dhaq dharkaaga biyaha qabow.
Adegso gaadiidka dadweynaha, wado baaskiilkaaga ama soco.
Waxaad kaloo ka mid noqon kartaa Barnaamijka Guryaha Sii-Jiraya adigoo iska diiwaangeliya www.sustainablehomes.vic.gov.au
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan beya’dda iyo sida loo daryeelo fadlan nala soo xiriir.
Waa maxay qorshayntu?
Waxyaalo badan oo aan qorshayno ayaa saameeya dadka kale sidaas darteed waxaan u baahanahay inaan raacno habraacyada qaarkood si loo hubiyo in go’aannada aan ka samayno wax ku saabsan isticmaalka iyo horumarinta dhulka ay yihiin kuwo caddaallad ah, habaysan, dhaqaale leh lana -sii-wadi-karo. Tixgelinta codsiyada Ruqsada Qorshaynta waxay siisaa Golaha Degmada fursadda si loo qiimeeyo u-qalmida iyo ku-habboonaanta horumarinta iyo isticmaalka dhulka ee mustaqbaleed.
Golaha Degmadu waxay maamushaa qorshaynta iyo kontaroolka dhismaha ayadoo la raacayo Xeerka Qorshaynta iyo Beeya’dda 1987kii iyo Mashruuca Qorshaynta ee Banyule iyo sidoo kale Xeerka iyo Qawaaniinta Dhismaha.
Goorma Ayaan u baahan doonaa ruqsadda qorshaynta?
Mashruuca Qorshaynta ee Banyule wuxuu ka kooban yahay soonayaal, isgoosyo iyo shuruuc kale kuwaas oo saameeya in ruqsad loo baahan yahay.
Guud ahaan, ruqsooyinku waxaa looga baahan yahay:
Baddalidda isticmaalka gurigaaga (tus. Dukaan loo baddalo xafiis, kafee loo baddalo tafaariiqle)
Wax-ku-daridda guryaha deegaanka
Ka-dhisidda wax ka badan hal dhismo guriga (yunidyo)
Horumarinta Ganacsiga, sanaacadda iyo adeegsiga isku-dhafan
Codsiga laysanka khamriga
Dhisidda ama bandhigga calaamadaha
Ka-daynta baarkinka baabuurka (la xiriira meelaha boosaska ganacsiga/sanaacadda ah)
Duminta dhismaha isgooyska hiddaha ah
Jaridda dhirta waxay kaloo u baahan tahay ruqsad.
Ayadoo ku xiran kontaroolada qorshaynta kaas oo saameeya gurigaaga, waxaad u baahan kartaa ruqsadda qorshaynta si aad ‘howl’ uga samayso gurigaaga. ‘Howshu’ waxaa ka mid ah haysashada derbiyada, deydka, sharraxaadda, dhismaha bargoolaha, xaaqidda kabisidda meel dibadda u baxsan, iyo xataa mashaariicda waaweyn oo ay ku jiraan qodidda, ku-rakibidda qaababka biyaha ee joogtada ah, balliyada waaweyn ama bakadaha dabaasha. Soo-jeedinta in wax laga baddalo qorshaha muuqaalka lagu ogolaaday codsi qorshayn hore ah waxay kaloo u baahan tahay ogolaansho.
Sidee baan ku ogaan karaa waxay yihiin kontaroolada qorshaynta oo khuseeya dhulkayga
Kontaroolada soonayaasha iyo isgoosyada oo khuseeya qayb kasta oo dhul ah oo ku taal Banyule waxaa la heli karaa ayadoo lala xiriiro Waaxda Qorshaynta ee Golaha Degmada, ama sidaas baddelkeeda ayadoo la helo adeegga onlineka ee Maababka Qorshaynta Onlineka oo ay bixiso Waaxda Beeya’dda, Dhulka, Biyaha iyo Qorshaynta iyo gelidda cinwaanka. Tas-hiilaadka online-ka waxaa laga heli karaa:
Imisa yunidyo ayaan gelin karaa dhulkayga?
Waxaa jira heerar iyo shuruudo dhowr ah oo la tixgeliyo markii laga fekaraya qorshayn lagu samaynayo goob. Horumarinta yunidyada Banyule waa inay tixgelisaa goobta guriga, cahdiga derisnimada (Faqradda 22.02 Mashruuca Qorshaynta Banyule), sida horumarintu ugu xiran tahay (Faqradda 55), haysashada dhirta jirta iyo muuqaalka dhulka ee lasoo-jeediyey (Tilmaamidda Soonaha Dhiraynta) iyo isticmaalka baabuurka ee goobtaas.
Mashruuca Qorshaynta Banyule waxaa laga heli karaa Online-ka Mashruucyada Qorshaynta.
Markii la tixgelinayo goob ee horumarinta dhismeyaasha badan ah, waxaa lagu talinayaa in baaris goob in la diyaariyo. Baarista goobta waxay gacan ka gaysanaysaa muujinta fursadaha iyo xanibaadyada goob gaar ah. Baarista goobta waxay si weyn u caawin doontaa go’aaminta horumarinta ee waxtarka goobta. Taas ayadoo ku salaysan, waxaa suurtagal ah in la go’aamiyo ku-habboonaanta goobta ee guryo badan iyo, haddii ay saas tahay ka dibna la-hadlidda saraakiisha qorshaynta Golaha Degmada, imisa dhismo ayaa loo tixgeliyey si habboon.
Ma u baahanahay Ruqsadda Qorshaynta si looga jaro geedka gurigayga?
Waxaa jira kontaroolo khuseeya ilaalinta iyo haysashada dhirta Banyule. Dhacdooyin badan ruqsad ayaa loo baahan yahay si loo jaro dhirta, aydoo ku xiran goobta dhulku ku yaal ee dowladda hoose. Si loo bixiyo macluumaad sax ah oo la xiriira geed qaadka ama talaalka geedka, waxaa lagu talinayaa inaad eegto geedka aad ka diyaariso macluumaad nooca, baaxadda, goobta iyo caafimaadka geedka lays-weydiinayo ka hor la-xiriiridda Golaha Degmada. Macluumaadkaas wuxuu ka caawin doona saraakiisha inay go’aamiyaan in ruqsada qorshaynta loo baahan yahay xagga qaadida ama filinjeedda geedka.
Sidee baan u sameeyaa codsiga Ruqsadda Qorshaynta?
Liiska soo socda waxaa loo adeegsan karaa sidii tilmaame markii la diyaarinayo in la gudbiyo codsiga ruqsadda qorshaynta. – halkan ka hel
Bixinta ujrooyinka macquulka ah -halkan ka hel.
Koobiga mulkiyadda (iyo wixii qalabyo, heshiisyo iwm) oo la soosaaray 30 beri gudahooda ee muddadii la xareeyey codsiga la xiriira – koobiga dhawaanta mulkiyadda ee dhawaantan waxaa laga heli karaa online-ka
Warbixinaha, qorsheyaasha iyo sawirada lagu aqoonsaday liiska-hubinta qorshaynta ee khuseeya.
Liiskaas maahan mid cad isla markii codsiga la soo gudbiyana, macluumaad dheeraad ayaa loo baahan karaa.
Demadu waxay ku dhiirigelisaa codsadeyaalka ruqsada si ay ula tashadaan mid ka mid ah saraakiisha qorshaynta Golaha Degmada ka hor si rasmi ah usoo-xaraynta codsiga. Taas waxaa lagu samayn karaa qaabilaadayada qorshaynta oo ah Rosanna Customer Service Office ayadoon loo baahanayn wax ballamo ah inta lagu jiro saacadaha shaqada xafiiska, ama waxaa laga wici karaa taleefanka.
Waa maxay habraaca ruqsadda qorshaynta immisayse qaadanaysaa?
Habraaca qorshayntu waa mid kakan waana inaan tixgelinaa qorsheyaal iyo shuruudo aad u ballaaran. Habraaca ruqsadda qorshaynta wuxuu ka kooban yahay marxaladaha soo-socda:
Diyaarinta iyo xaraynta codsiga
Golaha Degmadu waxay hubisaa codsiga (macluumaad dheeraad ah iyo meel-u-dirid ayaa la dalban karaa haddii loo baahdo)
Ogysiinta/xayeesiinta dadweynaha (ugu yaraan ogaysiin 14 beri ah ayaa la siiyaa waxaana laga yaabaa in diidmo la helo)
Kulamada la-talinta bulshada (haddii loo baahdo)
Sarkaalka Golaha Degmadu wuxuu diyaariyaa warbixin iyo talo-soo-jeedin
Go’aan ayaa la sameeyaa
Dib-u-eegidda VCAT (haddii loo baahdo)
Kan waa habraac adag kaas oo ay dejisey Dowlad Goboleedku. Markay tallaabooyinku u baahan yihiin codsigu inuu maro ay sii bataanba, waxaa sii dheeraanaysa qiimaynta ay qaadanayso.
Waqtiga uu qaadanayo habraaca qorshayntu waxay u kala duwan tahay inta u dhaxaysa 6 asbuuc ilaa 12 bilood, ayadoo ku xiran adkaanta adeegsiga, u baahnaanta macluumaad dheeraad ah, ogaysiinta dadweynaha diidmada iyo habraaca go’aanka. Haddii marxalad kasta aad wax su’aalo ah ka qabto oo ku saabsan codsiga fadlan la xiriir Sarkaalka Qorshaynta kaas oo qiimaynaya codsiga.
Sidee baan u raad-raaci karaa codsiga ruqsadayda isla markii aan soo xareeyo?
In yar kadib markii ay Golaha Degmadu hesho codsigaaga, waxaa lagu soo sheegayaa email ay ku qoran tahay faahfaahinta sarkaalka qorshaynta ay khuseyso, faahfaahinta xiriirkooda iyo lambarka tixraaca codsiga.
Codsigayga ma lagu tixgelin doonaa Kulanka Golaha Degmada?
Badiba codsiyada Ruqsadda Qorshaynta waxaa go’aamiya saraakiisha qorshaynta idman ayadoo la raacayo ‘awoodda loo-igmaday’. Taas macnaheedu waa inaan si rasmiya badiba codsiyada lagu tixgelin doonin kulanka Golaha Degmada.
Waxaa jira marar uu codsiga qorshaynta lagu tixgelin doono kukanka Golaha Degmada. Mararkaas waxaa ka mid ah codsasho (petition) loo soo gudbiyey asagoo ka horjeeda codsiga, codsiga lagu tixgeliyey inuu kasoo horjeedo qorshaha Golaha Degmada ama codsi kaas oo ah mid dan weyn u ah bulshada.
Sidee baan u diidaa codsiga Ruqsadda Qorshaynta?
Halkii ay soo-jeedintu keenayso wax dhaawicid ku ah qof kale ama amaanka goob, codsigu wuxuu u baahan yahay ogaysiin in la siiyo dadka ay saamaynayso soo-jeedintu. Cid walba way diidi kartaa codsiga qorshaynta ka hor intaan go’aan laga samayn. Haddii aad doonayso inaad diido codsiga, waa inay qoraal tahay (daabacan, la-qoray ama email lagu soo diray), oo ay ku taal faahfaahinta xiriirkaaga, faahfaahinta codsiga qorshaynta, sababaha lagu diidey iyo sidey kuu saamaynayso. Diidmada waxaa lagu soo buuxin karaa ayadoo la adeegsanayo foomka diidmada caadiga ah.
Waa maxay xuquuqdayda racfaanka?
Haddii aad diidan tahay codsiga loo sameeyey ogolaanshaha qorshaynta kaas oo uu taageeray Golaha Degmadu, waxaad xarayn kartaa racfaan (codsi dib-u-eegid) oo lid ku ah go’aankii Golaha. Racfaanka waa in lagu soo xareeyaa Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) muddo 21 beri gudahooda ah laga bilaabo taariikhdii go’aanka. Haddii Golaha Degmadu uu diiddo ama uu taageero codsigaaga oo ku xiran xaaladaha, codsadaha ruqsadda wuxuu haystaa fursadda inuu racfaan u qaato VCAT 60 maalmood gudahooda marka laga joogo taariikhda go’aanka.